Trulicity : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Trulicity ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Trulicity® (dulaglutide)သည် သွေးသကြားဓါတ်ကိုထိန်းပေးသည့် ဆီးချိုထိုးဆေးဖြစ်သည်။ Trulicity® (dulaglutide) ကို အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတို့နှင်တွဲပြီး အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုကိုထိန်းရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ Trulicity® (dulaglutide) ကို များသောအားဖြင့် တခြားဆီးချိုဆေးများနှင့် ထိန်းမရသည့်အခါတွင် ပေးလေ့ရှိပါသည်။ Trulicity® ကို အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုအတွက်မသုံးပါ။
Trulicity® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲပါ။ ဆေးအညွှန်းတွင်ပါသည်များကို သေချာလိုက်နာပါ။ ဆေးကို ညွှန်ကြားထားသော ပမာဏ၊ အချိန်ကာလထက် ပိုသောက်ခြင်းမျိုး မလုပ်ရပါ။ Trulicity® သည် အာနိသင်ရှိရှိနှင့်စိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန် လူနာအညွှန်စားနှင့် တွဲလာပါသည်။ သင့်ကိုပေးထားသမျှ လူနာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ဆေးအညွှန်းစာများကို အကုန်ဖတ်ပါ။ မေးလိုသည်များ ရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို မေးမြန်းပါ။
Trulicity® ကို အရေပြားအောက်တွင်ထိုးရ၏။ အိမ်၌ ဆေးထိုးရန်အတွက် သင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးထိုးပုံ၊ အသုံးပြုပြီးသာ ဆေးထိုးအပ်ဆေးပြွန်များအား စွန့်ပစ်ပုံများကို သေချာမသိပါက ကိုယ်ဟာကိုယ်အသုံးပြုခြင်းမျိုး မလုပ်ရပါ။
Trulicity® ကို အစာရှိရှိမရှိရှိသုံးနိုင်ပါသည်။
Trulicity® ကို များသောအားဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာထိုးရသည်။ ဆေးကို အပတ်စဉ် တူညီသောနေ့တွင်သာသုံးပါ။ လိုအပ်ပါက ဆေးထိုးသည့်ရက်ပြောင်းရနိုင်သည်။ အနည်းဆုံး တစ်ခါနှင်တစ်ခါကြား ၃ ရက်ခန့် ခြားရမည်။
ဗိုက်၊ ပေါင်၊ လက်မောင်းတို့တွင် ဆေးထိုးတိုင်း မတူညီသည့်နေရာတွင်ပြောင်းထိုးပါ။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှ Trulicity® ထိုးရန် အကောင်းဆုံးနေရာကို ပြပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးကို တစ်နေရာတည်း နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်မထိုးရပါ။
ဆီးချိုရှိသူတိုင်း သွေးသကြားဓါတ်ထိုးကျခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ လက္ခဏာများမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်ဆာခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနှင့် စိုးရိမ်သလို ခံစားရခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သွေးသကြားဓါတ်ကျခြင်းကို မြန်မြန်ကုသရန်အတွက် အာနိသင်အမြန်ပြသည့် သကြားရင်းမြစ်များဖြစ်သော သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ချိုချဉ်၊ ဘီစကစ် နှင့် ဆိုဒါများကို အမြဲဆောင်ထားပါ။
သွေးသကြားဓါတ်ကျခြင်းမှာ အတော်ဆိုးပြီး မစားနိုင်မသောက်နိုင်အထိဖြစ်ပါက ဆရာဝန်မှ glucagon emergency injection kit ကို ညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ဤဆေးကို အရေးပေါ် မည်သို့ထိုးရကြောင်း သင့်မိသားစု၊ သင့်မိတ်ဆွေများ သိအောင် ပြောပြထားပါ။ ထို့အတူ သွေးသကြားဓါတ် တိုးလာသည့်လက္ခဏာများဖြစ်သော ရေဆာခြင်း၊ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း၊ အမြင်ေဝဝါးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်းများကိုလည်း သတိပြုရမည်။
သွေးသကြားဓါတ်လယ်ဗယ်ကို ဖိစီးမှုများ၊ ဖျားနာခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အရက်နှင့် အစားတစ်နပ် မစားမိခြင်းတို့က သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါသည်။ အင်ဆူလင်ပမာဏ သို့မဟုတ် သုံးမည့်အချိန်ဇယား မပြောင်းလဲခင် ဆရာဝန်ကိုအရင်မေးပါ။
တစ်ခါသုံးအပ်ကို တစ်ခါသာသုံးပါ။ ဆေးထိုးအပ် ဆေးထိုးဖောင်တိန်များအား စွန့်ပစ်ရာတွင် ဒေသအလိုက် ဥပဒေများကိုလိုက်နာပါ။ အပ်မပေါက်နိုင်သော အာမခံပုံးများ (ဝယ်ယူရန် ဆေးဆိုင်များတွင်မေးနိုင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပုံကိုပါ မေးပါ။) ကိုသုံးပါ။ ထိုပုံးများကို ကလေးများ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Trulicity® သည် ကုသမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းခြင်း၊ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်စစ်ခြင်းနှင့် အထူးဆေးကုသမှုများ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသမျှကို သေချာလိုက်နာပါ။
Trulicity® (dulaglutide)ဆေးထိုးဖောင်တိန်နှင့် ဆေးဖိုးပြွန်များကို အလင်းနှင့်မထိအောင် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းပါ။ Trulicity® နှင့်ဆိုင်ရာကို ပစ္စည်းများကို မသုံးဖြစ်ဘဲဒိတ်ကုန်သွားပါက အကုန်လွှင့်ပစ်ပါ။ ဆေးထိုးဖောင်တိန်များနှင့် ဆေးရည်ဖြည့်ပြီးသားဆေးထိုးပြွန်များကို အခန်းတွင်းအပူချိန်၌ ၁၄ ရက်အထိထားနိုင်ပါသည်။
Trulicity® ကို အေးခဲအောင်မလုပ်ရ။ ခဲသွားပါက ဆေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။
Trulicity အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Trulicity® တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
အောက်ပါတို့ရှိလျှင် Trulicity® ကို မသုံးရပါ။
Multiple endocrine neoplasia အမျိုးအစား ၂ (ဂလင်းများတွင်ဖြစ်သောအကြိတ်)
medullary thyroid carcinoma ဖြစ်ဖူးခြင်း၊ မိသားစုအတွင်းဖြစ်ဖူးခြင်း (သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာတစ်မျိုး)
Diabetic ketoacidosis (အင်ဆူလင်နှင့်ကုသရန် ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ)
တိရိစ္ဆာန်များတွင်လေ့လာချက်အရ Trulicity® သည် သိုင်းရွိုက်အကြိတ်နှင့်ကင်ဆာများ ဖြစ်တတ်၏။ လူများတွင်တော့ ဆေးကိုမှန်မှန်သုံးလျှင် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မသိရသေးပါ။ အန္တရာယ်ရှိမရှိသိနိုင်ရန် ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Trulicity ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Trulicity ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Trulicity®နှင့်ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သော အပိန့်များထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်းတို့ဖောင်းကြွလာခြင်းများ ဖြစ်လာပါက အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူရမည်။
မုန့်ချိုအိတ်ရောင်သည့်လက္ခဏာများ – ဗိုက်အထက်ပိုင်းတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာပြီး ကျောက်ဖက်ထိုပြန့်လာခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း။
သိုင်းရွိုက်အကြိတ်လက္ခဏာများ – လည်ပင်းတွင် အကြိတ်ဖြစ်လာခြင်း၊ မျိုချရခက်ခြင်း၊ အသံသြခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း
သွေးသကြားဓါတ်ကျခြင်း – ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်ဆာခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း
ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ – ဆီးသွားနည်းခြင်း၊ ဆီးမထွက်ခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင် နာခြင်း၊ ခြေထောက်၊ ခြေကျင်းဝတ်တို့၌ ဖောရောင်ခြင်း၊ မောသလိုခံစားရခြင်း အသက်ရှူမဝခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်လျှောခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Trulicity နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trulicity® (dulaglutide) သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Trulicity နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Trulicity® (dulaglutide) က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Trulicity နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trulicity® (dulaglutide) သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အစာအိမ်နှင့် အူရောဂါများ (အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါပါရှိနေလျှင်)
အစာရေမျိုပြွန်သို့ပြန်ကန်တက်ခြင်း (GERD) သို့မဟုတ် အစာခြေနှေးခြင်း
အင်ဆူလင် သို့ ဆီးချိုကျသောက်ဆေးများပါ သုံးနေရခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Trulicity ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကနဦးပမာဏ: 0.75 mg ကို အရေပြားအောက် ထိုးဆေးအနေဖြင့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထိုးရန်။
အများဆုံးပမာဏ: Glycaemic control ရရန်အတွက် 1.5 mg အထိတိုးပြီး အရေပြားအောက် ထိုးဆေးအနေဖြင့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထိုးနိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Trulicity ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Trulicity® (dulaglutide) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုးဆေးရည်: Dulaglutide 0.75mg in 0.5mL
Trulicity® (dulaglutide) ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Trulicity®. http://www.rxlist.com/trulicity-drug.html. Accessed August 2, 2017